Xiddiga Real Madrid Sida Fudud Kaga Baxsaday Ee Ay U Waalanayaan Chelsea, Manchester City Iyo PSG - GOOL24.NET
Xiddiga Real Madrid Sida Fudud Kaga Baxsaday Ee Ay U Waalanayaan Chelsea, Manchester City Iyo PSG
Kooxaha waaweyn ee Yurub ee Chelsea, Manchester City iyo Paris Saint-Germain ayaa jawaab diidmo ah kala kulmay dalabyo ay ka gudbiyeen mid ka mid ah xiddigihii sida fudud ay ku fasaxday Real Madrid, isla markaana wacdaro ka dhigaya garoomada.
Xiddiga Faransiiska ee Theo Hernandez ayaa xilli ciyaareedkan socda iyo midkii ka horreeyey ba uu bandhig heersare ah ka samaynayay garoomada, isaga oo AC Milan ka caawiyey inay kusoo laabato tartanka Champions League oo ay sannado ka maqnayd.
24 jirkan oo Real Madrid ay markii hore amaah ku siisay AC Milan ayay mar dambena si rasmi ah uga iibisay, waxaanay si buuxda sirfaddiisu ugu qaan-gaadhay San Siro Stadium oo uu ka noqday halyey kubbad-samayn, difaacis iyo weerar ay la socoto gool-dhalin intaba ka samaynaya.
Chelsea ayaa la rumaysan yahay inay bishan January isku dayayso inay Theo Hernandez kala saxeexato AC Milan si uu ugu buuxiyo booska uu ka dhaawacmay Ben Chilwell, hase yeeshee Manchester City iyo PSG ayaa iyaguna si dhow ula socda laacibkan.
Wargeyska Calciomercato ee kasoo baxa waddanka Talyaaniga ayaa qoray, in Theo Hernandez uu dhabarka u jeediyey kooxahan oo dhan, isla markaana uu u sheegay in aanu ka tegaynin Milan oo uu sii joogayo.
Calciomercato waxa uu intaa ku daray, inuu Theo Hernandez uu qalinka ku duugayo heshiis cusub oo uu Milan kula sii joogayo ilaa laga gaadhayo sannadka 2026 ama 2027, waxaana arrintan ka shaqeeyey oo ku qanciyey Paolo Maldini.
Mushaharka uu laacibkani qaato oo sannadkii ah €1.5 milyan oo Euro ayaa uu heshiiskan cusub gaadhsiin doonaa illaa €5 milyan oo Euro.